Igumbi elingaphansi eliqediwe elinendawo yokungena yangasese Ikhaya
I-Suite inakho konke okudingayo ukuze ukhululeke: indawo yokungena yangasese, ukusetshenziswa kwewasha/indawo yokomisa, indawo yokugezela yangasese, ikhishi, isihlalo se-inthanethi ye-Wi-Fi nesihlalo sokubhucunga, esitholakala emizuzwini eyi-15 eningizimu yesikhumulo sezindiza i-ATL, futhi eduze ne-Atlanta Metro Studios, i-Driveway yamahhala noma ukupaka emgwaqweni. Indawo evulekile eyimfihlo engaphansi eqediwe enegumbi lomndeni lokugezela eline-TV, i-PC ne-Wi-Fi, i-Bluetooth Stereo, umbhede ongaphezulu womcamelo we-Queen Size ku-Bedroom, isiqandisi kanye ne-microwave ukuze kube lula izivakashi .Ingakwazi ukuhlalisa umndeni wabathathu noma abane.
Indawo ethule cishe. Amamayela angu-14 ukusuka e-ATL Airport. Izitolo zokudlela zitholakala ngaphandle kwedolobha lenyunyana (Fairburn) futhi indlu yethu isendaweni eyi-de-sac ngakho-ke kunabantu abambalwa.
4.60(109 okushiwo abanye)
4.60 out of 5 stars from 109 reviews
4.60 · 109 okushiwo abanye
Isivakashi singashayela umsingathi @ noma nini